Xiaomi Redmi Note 8 Black (6GB/128GB) ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Redmi Note 8 Black (6GB/128GB)
Xiaomi Redmi Note 8 Black (6GB/128GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Xiaomi Color: Black Display Size: 6.3″ Resolution: 1080 x 2340 Rear Camera: 48 MP, 8 MP,2MP,2MP Front-Facing Camera: 13 MP CPU: Octa Core Memory:... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 153955N/ASee more: Mobile Phones, Products, Recent Updates, Shop, XiaomiFilter by: Smartphones
အမိုက်စား Feature တွေပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Xiaomi Redmi Note 8 စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝန်းတဲ့ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ရှေ့ဘက်ရော၊ နောက်ဘက်မှာပါ Gorilla Glass5ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အတွက် IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပြီး မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.3” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Resolution အနေနဲ့ Full HD+ resolution (1080 x 2340 pixels, ~409 ppi density) ရရှိတဲ့အတွက် အလန်းစားရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုရမှာပါ။ OS အဖြစ် Android 9.0 နဲ့မောင်းနှင်ပေးထားပြီး Android 10 ကို Upgrade ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ User Interface အတွက်ကိုတော့ MIUI 12 နဲ့ အသုံးပြုရမှာပါ။ System ပိုင်းမှာ Chipset အဖြစ် နာမည်ကျော် Snapdragon ရဲ့ Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) ၊ CPU အဖြစ် 2.0 GHz Octa-core proessor ၊ GPU အဖြစ် Adreno 610 တို့ကို တွဲဖက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Internal Storage က 128GB အထိပါဝင်တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းနဲ့ App ဒေတာတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ RAM 6GB ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လို App မျိုး ဂိမ်းမျိုးကိုမဆို သွက်သွက်လက်လက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Apps တွေအများကြီး တပြိုင်နက် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း လုံးဝ အထစ်အငေါ့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ကျောကင်မရာစနစ်အဖြစ် 48MP (wide) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) + 2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ 120 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်သလို အနုစိတ်ပုံရိပ်တွေနဲ့ Portrait အလှဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ 4K Resolution ဗီဒီယိုတွေကို 30fps နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Gyro-EIS ပါဝင်တဲ့အတွက် သွားရင်းလာရင်း ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ ရိုက်ချက်တွေက လှုပ်ရမ်းမနေဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေမှာပါ။ အလန်းစား Selfie ပုံရိပ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ရှေ့ဘက်မှာ 13MP (wide) Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် Fingerprint ကို ပုံမှန်အတိုင်း နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် 4000 mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပြီး Fast Charging 18W (Type-C) Adapter နဲ့ အလျင်အမြန် အားပြန်သွင်းပေးနိုင်မှာပါ။ USB OTG ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
Redmi Note 8 sportsa6.53-inch FHD+ LCD screen with 90 percent screen-to-body ratio, and TÜV Rheinland eye protection certification. It is powered by Snapdragon 665, Adreno 610 GPU, 6GB RAM, and up to 128GB internal storage.It will run on the Android9Pie along with MIUI 10. The quad rear camera setup is consisted ofa48MP main camera with 4-in-1 pixel binning for low-light shots, 8MP 120-degree ultra-wide angle lens, 2MP depth sensor, anda2MP sensor for 2cm macro shots. Meanwhile, it will havea13MP selfie camera.Redmi Note 8 packsa4000mAh of battery with support for 18W fast charging.
Total price:K479,845 K463,145
This item: Xiaomi Redmi Note 8 Black (6GB/128GB) K388,000